Ebe obibi ndị mọnk nke Kykkos, Cyprus
Na Saịprọs, ọtụtụ ndị mọnk nke Ọtọdọks, nke kasị baa uru bụ Kykkos. Ọtụtụ ndị njem nleta na ndị pilgrim dị njikere ịga n'ebe nsọ a.
Akụkọ banyere okike nke ebe obibi ndị mọnk Kikk
Ebe obibi ndị mọnk nke Virgin Mary nke Kikk bụ onye a gọziri agọzi hiwere na 1080 mgbe Emperor Alexius nke mbụ Comnenus wetara n'àgwàetiti ahụ akara ngosi na onyinyo nke Nne nke Chineke, nke Luk onyeozi dere.
Ọtụtụ ndị njem nleta mgbe ha na-eleta ebe obibi ndị mọnk nwere mmasị na: "Gịnị mere aha ahụ jiri okwu Kykkos?". E nwere ọtụtụ nsụgharị nke ihe mere a na-akpọ ugwu nke ebe obibi ebe obibi ndị mọnk ahụ dị. Nke mbu na-ekwu banyere nnunu nke buru amụma banyere iwu ụlọ nsọ ebe a. Nke abụọ kwuru banyere ohia "Coccos", na-eto eto na mpaghara a.
Kedu otu esi aga ebe obibi obibi obibi nke Kykkos?
Ugwu, ebe dị elu nke mita 1310 n'elu oké osimiri bụ ebe obibi ndị mọnk nke Kykkos, dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke Troodos massif. Ọ dị mfe ịnweta ya site n'ụgbọala, ebe ọ bụ na e nwere ihe ịrịba ama niile n'ụzọ. N'ebe obibi ndị mọnk ahụ, e nwere ọtụtụ ụzọ: site na Paphos na Polis na Limassol (karịa ma dị nchebe).
Kedu ihe ị ga-ahụ n'ebe obibi ndị mọnk nke Kykkos?
N'ime ndị njem nleta na-abịa Cyprus, ebe obibi ndị mọnk a bụ nke a kasị mara amara. Ọ bụ n'ihi na ekele maka mgbalị nke rector, ọ bụghị nanị na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ, ma nwekwara nwere nke ọma mepere njem na mpaghara ya.
Ozugbo n'ime ebe obibi mọnk stauropegic nke Kikk Icon nke Nne nke Chineke, ọ dị mkpa ile anya na akara ngosi nke Virgin. Ọ dị n'ime ụlọ ụka ahụ, ma ọ gaghị ahụ anya, ebe ọ bụ na a na-emechi akara ngosi ahụ ma otu obere akụkụ ya ka na-emeghe.
Na mgbakwunye na akara ngosi a ma ama, n'ókèala nke ebe obibi ndị mọnk ọ na-atụ aro ka ị gaa na:
akara ngosi nke Virgin na Otrada, na Consolation, nke kemgbe 1997 bụ myrrh-winding;
ụlọ mgbịrịgba, nke dị na mkpọda ugwu ahụ dị nso n'ebe obibi ndị mọnk ahụ.
ili nke Achịbishọp Makarius nke Atọ, Onyeisi mbụ nke Saịprọs;
ocheeze, na n'elu ocheeze, ebe e nwere otu akara ngosi na-enye ndụ. Ọ bụ ebe a ka ndị mmadụ na-abịa kpee ekpere na ịrịọ maka mmiri ozuzo;
ụlọ ihe ngosi nka nke dị na ugwu. O nwere nchịkọta kasị baa ụba nke arịa ụlọ ụka, akwụkwọ ochie na akara ngosi;
Ọ bụrụ na ị maghị ihe ị ga-esi na Saịprọs bịa , mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịzụta ihe ncheta ma ọ bụ mmanya a ma ama.
Hurghada, ogige mmiri "Mirage"
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Vladimir
Sri Lanka - visa
Nnukwu ogige mmiri dị na Russia
Oge na Tunisia
Visa visa - iwu ọhụrụ
Wroclaw - ebe nkiri
Ebee ka àgwàetiti Caribbean dị?
Oge ezumike na Gris
Ememe ncheta ụbọchị ọmụmụ
Kedu ihe ị ga-ahụ na Rom?
Kedu ka esi belata prolactin n'ime ụmụ nwanyị?
Queen Elizabeth II na ezinụlọ ya gara na picnic nke Patron
Nwee uwe na-acha odo odo
Nkume na ụkwụ - ihe kpatara ya
Ntugharị si karama plastik
13 nkpuchi nke i nwere ike izute mmuo
Kedu esi kụziere nwatakịrị ka ọ mara ọdịiche dị iche iche?
Uwe na ụdị jazz
Nkịtị ọgwụ maka ime imechi
Uwe Mkpu uwe 2013
Ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na ikiri ụkwụ
Lemonema - ọma na ihe ọjọọ
Ngwá ọkụ ọkụ maka ọkụ
Ezi ọnụ nke eriri ụdọ
20 ike gwụrụ ndụ anụmanụ
Kedu otu esi ahọrọ akwa uwe?
Melania Trump na-ekwu na ya emeghị plastic ma ghara anabata Botox
Ụmụ akpụkpọ ụkwụ Calipso
Kedu uru ndị a na-enweta na ikpo ahịhịa?
Anya nke Alexandrov